Manchester United Iyo Chelsea Oo Ku Dagaalamayaan Lucas Vasques.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Manchester united iyo chelsea oo ku dagaalamayaan Lucas Vasques.
Xiddiga garabka ka ciyaara ee real madrid lucaz Vasques ayaa aad loola xariitrinayaa Manchester United iyo kooxda Chelsea isagoo Lucas Vazquez uu meesha ka saaray wararka xanta ah ee suuqa kala iibsiga isagoo ku adkeystay inuu “had iyo jeer noqon doono nin Real Madrid ah.
Vazquez wuxuu ku dhowyahay labadii bilood ee ugu dambeysay qandaraaskiisa Santiago Bernabeu welina ma jiro wax war ah oo la taaban karo oo ku saabsan kordhinta suurtagalka ah.
29 jirka ayaa ku qanacsan mustaqbalkiisa iyadoo laga hadlayo inuu u dhaqaaqi karo Premier League, inkastoo uu xubin muhiim ah ka ahaa kooxda Zinedine Zidane mar kale 2020-21.
Previous articleJorginho oo ka hadlay go’ankiisa joogitaanka Kooxda Chelsea
Next articleLiverpool oo xiiseyneysa saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Holland bedelka Georginio Wijnaldum